ईश्वर पोखरेलको श्वेतपत्रमा जनार्दन शर्माको... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसदसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नै पार्टीको सरकारप्रति विश्वासको संकट आइपरेको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले हालै सार्वजनिक गरेको नेपाल ट्रष्टको श्वेतपत्रमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेको भन्दै शर्माले झुठा कुरा लेखिएर अश्वेतपत्र जारी गरिएको बताए।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै शर्माले श्वेतपत्रबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट जवाफ पनि माग गरेका छन्।
‘श्वेतपत्र भनेको के हो? कुनै विषयमा जस्ताको त्यस्तै ल्याउनका लागि श्वेतपत्र जारी हुन्छ होला भन्ने मैले बुझेको थिएँ,’ उनले भने, ‘मैले मिडियाबाट थाहा पाएँ, जग्गा लिज दिन फलाना फलाना लागे भन्ने पढें। त्यो पढिसकेपछि तथ्य के होला भनेर खोज्न ट्रष्टको कार्यालय गएर माइन्युट हेर्न निवेदन दिएँ। तर हेर्न दिइएन।’
लिखित निवेदन दिएर माइन्युट हेर्न माग गरे पनि ताल्चा लगाएको छ खोल्न मिल्दैन भनिएको शर्माले बताए।
‘मैले कर्मचारीहरूसँग भने, मेरो नाम पनि आयो। गृहमन्त्री हुँदा म ट्रष्टको कार्यालय पसेको पनि थिइनँ,’ उनले भने, ‘तर कसरी आयो मेरो नाम? कर्मचारीहरूले तपाईं हुँदा बैठक भएको पनि थिएन भनेको भन्नुभयो। कुनै निर्णय भएको छैन हजुरको पालामा भनेर भन्नुभयो। मैले मुख्यसचिवलाई पनि सोधें, कुनै निर्णय भएको थियो त? उहाँले झुठा भन्नुभयो। म आश्चर्यमा परेँ यो श्वेत पत्र हो कि अश्वेत पत्र हो?’
श्वेतपत्र जारी गरिएको हो भने जस्ताको त्यस्तै आउनुपर्ने उनले बताए।
‘२०७४ कात्तिक १३ गते निर्णय भएको भन्नेमा आफ्नो नाम श्वेतपत्रमा जोडिएको र त्यसैलाई आधार मानेर अनलाइन र पत्रिकाहरूमा समाचार देखें,’ शर्माले भने,‘ मैले भर्खरै भएका निर्णयहरू पनि हेरें, त्यहाँ नाम उल्लेख गरेर निर्णय लेखिएको रहेनछ। मिति मात्रै लेखिएको छ। नाम कहिँ लेख्नु नपर्ने कहिँ लेख्नुपर्ने? असोज ३० गतेबाट गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटेको थिएँ, म मन्त्री नै नभएको बेला नाम लेखिएको कारण के? लेख्नुपर्ने नाम किन लेखिएन। यो अश्वेतपत्र किन लेखियो? भ्रष्टाचार हुन हुँदैन भनेर दुईचार कुरा बोलेको छु त्यसैले हुनुपर्छ।’
सरकारलाई समर्थन गर्न दलालको घेराबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने आफूले भनिरहेको पनि उनले बताए।
‘मलाई तर्साउन खोजिएको हो? मलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजेको हो? असत्यको अगाडि कहिल्यै पनि आत्मसमर्पण गर्दिनँ। म तर्सिन पनि तर्सिंदैन,’ उनले भने।
सरकारले आफूलाई ढाँट्न सके पनि जनतालाई नसक्ने उनले बताए।
‘श्वेतपत्रमा जसरी लेखियो त्यसले मलाई त सरकारले ढाँट्न सक्ला। जनतालाई ढाँट्न सक्छ?’ उनले भने, ‘मतदातालाई ढाँट्न सक्छ? किमार्थ सक्दैन। जनता र मतदाता ढाँट्ने सरकारले कहिले पनि काम गर्न सक्दैन। कसरी विश्वास गर्ने सभामुख महोदय, विश्वासको संकट पर्‍यो यहाँ। विश्वासको संकट हुने गरी किन नाम लेखियो। म गृहमन्त्री नै छैन नभएको नाम लेखेर मिडियाबाजी किन गरियो? ट्रष्टका कर्मचारी र मुख्यसचिवले भन्दाभन्दै किन नाम लेखियो। मलाई शंका उत्पन्न भयो। विश्वासको संकट पर्‍यो। आफ्नै पार्टीको सरकारलाई समर्थन गर्दागर्दै।’
उनले ऐन कानुन दुरूपयोग गरिएकोमा सरकारबाट जवाफ चाहेको उनले बताए।
यसअघि बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पोखरेलले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा आपत्ति जनाएका थिए।
पोखरेलले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा ताहाचलस्थित ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने निर्णय देउवा प्रधानमन्त्री र शर्मा गृहमन्त्री हुँदा भएको उल्लेख छ।
बाँस्कोटा प्रकरणबाट ध्यान मोड्न ट्रष्टको जग्गामा मलाई जोडियो: देउवा
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १५, २०७६, १३:५९:००
'बुवासँगै बेल्जियमबाट फर्किएकी भए मलाई कोरोना संक्रमण हुने थिएन कि!'
लकडाउन र सीता अनिशा भट्टराई